Miyeey ka qeyb galayaan Harry Maguire iyo Pogba kulanka Chelsea? – Waxaa ka jawaabaya Tababare Solskjær – Gool FM
(England) 09 Agoosto 2019. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay in xiddigaha Harry Maguire iyo Paul Pogba ay qeyb ka noqon doonaan kulanka ay kaga daah furan doonaan horyaalka Premier League, kaasoo ay Axada soo aadan kula ciyaari doonaan dhigooda Chelsea.
Harry Maguire ayaa ku soo cago dhigtay kooxda Red Devils isniintii lasoo dhaafay adduun lacageed dhan 80 milyan ginni, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay Leicester City.
Dhinaca kale mustaqbalka Pogba ayaan weli la hubin iyadoo la isla dhexmarayo in maamulka kooxda Manchester United ay ku fikirayaan inay iska iibiyaan inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, inkastuu suuqa dhanka England xalay xirmay.
Macalinka reer Norwegian ayaa wareysi uu ku bixiyay Taleefishinka kooxda wuxuu ku sheegay:
“Harry Maguire wax badan ayuu i soo jiitay, wuxuu ka dheeryahay kana weynyahay sida aan ka aaminsanaa, wuxuu inoogu yimid si uu inoo siiyo awood dheeri oo dhab ah, wuxuuna saamayn ku yeelan doonaa dhalinyarada inteeda kale”.
“Harry wuxuu diyaar u yahay inuu ciyaaro, waana hubaa inuu diyaar u yahay maxaa yeelay dhowr ciyaarood ayuu la ciyaaray Leicester City, kahor bilowga xilli ciyareedka, wuu nala tababartay wuxuuna bilaabay inuu diyaar u noqdo inuu ka qeyb qaato”.
“Pogba wuu nagu soo biiri doonaa sidoo kale, kulankii Milan waxaan go’aansaday inaan qatar gelinin isaga, laakiin wuxuu nagu soo biiray ciyaartii Blackburn ee maalintii xigtay wuxuuna tababarka nala sameeyay albaabada oo xiran”.